Kedu ka ọgụ mbụ siri gbasie Jọshụa dị arọ mgbe Klitschko: foto | TeraNews.net
Kedu ka ọgụ mbụ siri gbasie Joshua ike mgbe ọ gbasasịrị Klitschko: foto
na-ede akwụkwọ nka E bipụtara 09.11.2017
Onye ọkpụkpọ ọkpọ Britain ama ama ama ama na Britain, Anthony Joshua, meriri mmeri n'isi mbụ ya na onye otu onye Cameroon - Carlos Takama. Ọgụ a mere na Millennium Stadium n'isi obodo Wales, Cardiff. Cheta na anyị na-ekwu maka otu onye England ahụ, onye 29 Eprel 2017 afọ site na teknụzụ nka na Wembley Stadium na London, meriri egwuregwu megide Wladimir Klitschko.
Ndi okacha mara ihe n’egwuregwu achoputara otutu odidi n’otu onye n’egwuregwu di egwu si na Albion ya na ndi Africa n’etiti. Ka ọ tụgharịrị, ndị nkuzi Anthony Joshua nọ na-akwado onye na-eme egwuregwu ka ha soro onye ọrụ Bulgarian ọgụ, Kurbat Pulev, onye, ​​n'ihi mmerụ ahụ, tụfuru agbarụ ụbọchị 12 tupu World Cup. Iji ghara ịkagbu asọmpi ahụ, ndị otu ahụ kpebiri maka ịchọ onye mmegide nke onye England ahụ. Ọ tụgharịrị siri ike ịchọta ihe dị arọ, yana ọbụna nke dị elu, ọ bụ ya mere ha ji biri na Cameroon.
Ọgụ ahụ tụgharịrị ịbụ ihe na-atọ ụtọ maka ndị egwu, ndị tinyelarịrị na 4 gburugburu nwere ekele maka ọzụzụ na ike nke onye ọkpọ ọkpọ Africa, onye kwaturu Briton. Kaosiladị, na -agba nke iri, chioma kwagara onye England ahụ, onye mechara merie n'ọgụ ahụ maka nlọghachi azụ nke onye isi. Na-ekpe ikpe site na nzaghachi sitere na ndị na-ege ntị na netwọ mmekọrịta, Takam dị n'ụkwụ ya ma nwee ike ịga n'ihu egwuregwu ahụ, si otú a na-ajụ ndị na-ahaziri asọmpi ajụjụ a.
Dika onye ritere mmeri, enweghi nkwadebe gbochiri Kamiko ikpu. Ndị nkuzi ahụ kwadebere Jọshụa maka ọgụ ahụ ya na Kurbat Pulev nke nwere mita abụọ, na-agbanwe nguzo ya na ntamu ya na uto nke onye mmegide ahụ. Ikekwe na-arụ ọrụ na sparring obere ụmụ nwoke ga - enyere onye na - eme egwuregwu aka itinye onye Africa ụzọ. Mana dị ka ha na-ekwu, e kpeghị ndị meriri emeri ikpe - eriri ọkpọ ọkpọ na aka a nke ìgwè mmadụ puku mmadụ 75 puku gara Briton Anthony Joshua.
Nchikota na nkwonkwo: n'ihi ihe ọ bụ na ọ na-emerụ ahụ
Adidas CG Polta AKH I sneakers: symbiosis nke Climacool JawPaw na Samba
Matcha tii: kedu ihe ọ bụ, abamuru ya, etu esi esi esi a andụ ihe ọ drinkụ .ụ
Xiaomi Yi Sport - igwefoto emereme maka oge niile
Treadmill: uru na ọghọm ya
Abụba Ọkụ Abụba: Echiche Fromgha Site na Ntanetị